Wax-kubarashada Gurigu Waa Lacag-La'aan
Wax-Kubarashada Guriga oo Lacag-La'aana
Ilaha lacag-la'aanta ee guri wax-kudhigashada iyo meel durugsan wax-kubarashada oronavirus (COVID-19) awgiis.
Dugsi si Weyn u Furan
Jidka Sisinta ee Bulshada Gudaheeda
Xarunta Barashada PBS
Carruurta la kulan
Gabbo Gabboo Muus
ilaha Caafimaadka la Tabiyay
Warbaahinta Common Sense
Qalab lacag-la'aana oo ay keeneen ururrada waxbarashada ee hoggaaminaaya si ay ardaydu uga barato dhibabka COVID-19
Wax Dheeri ah ka Baro Dugsiga sida Weyn u Furan
Goobta waxaa laga bixiyaa casharro doora oo caafimaadka ku saabsan, ladnaan dareemeedka, dabacsanaan iyo xushmo iyo fahamka- si markaas ilmahoo dhan garaad ugu koraan, xoog iyo naxariis intaba.
Wax Dheeri ah ka baro Jidka Sisinta ee Bulshada Dhexdeeda
Ka dhis xirfado cusub aagag kala duwan sida suuqgeynta, wax-sawiridda, naqshaynta, iyo dheefinta. Akadeemiyada Shaw waxay bixinaysaa4-toddobaad casharro lacag-laaana si lagaaga caawiyo inaad dib uga fakarto suurtagalnimada horumar xagga waxbarashada.
Dheeri ka Baro Akadeemiyada Shaw
Meelaha laga barto Afafka English-ka iyo Spanish-ka, ee loo gaar yeelay dhacdooyinka hadda jira, ELA, Saynis & maqaallo ku saabsan Waxbarashooyin Bulsheedka, oo ay weheliyaan aqris-aad loo maqlaayo iyo imtixaanno yaryar.
Wax Dheeri ah ka Baro wararkaDOGO
Ku biir naadiga dhallinyarada ee ugu weyn, ogaanaya, sahaminaaya oo dib u eegaya buugta. Hal-tusaaleedyada aqri, soo amaaho buugta-e oo ku guulayso buug lacag-la'aana.
Wax Dheeri ah ka Baro buugtaDOGO
Dheelaha onlaynka iyo kuwa la daabici karo ee loo naqshadeeyay in lagu kobciyo waxbarashada dhallaanka ilaa da'da kuraynimada.
Dheeri ka Baro PBS
Matxaf Goboleedka Fanka
Carruurtu waxay ku heli karaan cashar xagga fanka iyo dhaqanka mawduuc leh tusmo xooggan, iyo sidoo kale aalad so ay uga qeyb galaan wareeg hawleedka matxafka.
Dheeri ka baro Carruurta Lakulan
Casharrada la falgala sheekooyinka iyo qeybaha codka duuban leh sida Fiisikis, Kimistari, Sayniska Dhulka, iyo qaar kale.
Dheeri ka Baro Jimcaha Sayniska
Carruurta ku jirta fasalka ka horreeya da' dugsiyeedka ilaa fasalka lixaad waxay adeegsan karaan xirfadahooda xisaabaha iyagoo kaashanaya dheelaha, imtixaannada yarya, waxyaalaha lagu ciyaaro, iyo dheeri.
Dheeri ka baro oolMath4Carruur
Maktabadda ka badan 60,000 buugta-e ee lacag-la'aanta taas oo ay ku jirto qaybta suugaanta carruurta halkaas ay carruurtu soo degsan karaan ama casharradooda onlayn ku akhrisan karaan.
Dheeri ka Baro Mashruuca Gutenberg
App-ka looxa carruurta oo ay weheliyaan hal-xiraalayaal, maabab, iyo dheelo.
Dheeri ka baro Storyline Online
Raadi xog dheeri ah oo ku saabsan qeybo mawduucyo xagga caafimaadka. Kororso aqoon dheeri ah oo ku saabsan COVID-19 iyo sida aad ugu diyaar garoobayso si aad markaas u hubsato inaad guriga joogayso inta waqtigaan lagu jiro.
Aqoon ka kororso Ilaha Caafimaadka la Tabiyay
Waxbarashad kala jaadka: Khan Academy
Ilaha waxbarashada onlaynka ee da' walba, layliyo soobandhigid, fiidowyo la hagahaayo iyo qaar kaloo badan.
Aaladda onlaynka ee kaa caawinaaya helista kulliyad adiga kugu habboon.
Helitaanka goob-mareegeed lagu kalsoonaan karo
Tibaaxaha lagu helaayo xog onlaynka oo waxtara, lagu kalsoonaan karo, oo saxa.
Ka digtoonow waxyaalaha gaarka kuu ah ee onlayn-kaaga
Waxyaalaha qaarkood oo ay tahay inaand xusuusnaato oo ku saabsan arrimaaha qarsoodiga kuu ah markaad adeegsanayso intarneedka.